DEG-DEG: Xiddig Muhiim Ah Oo Ku Dhaawacmay Tababarkii Xulka England Ee Maanta - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Xiddig Muhiim Ah Oo Ku Dhaawacmay Tababarkii Xulka England Ee Maanta
DEG-DEG: Xiddig Muhiim Ah Oo Ku Dhaawacmay Tababarkii Xulka England Ee Maanta
July 2, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 2
Xulka qaranka England ayaa waxa ka dhaawacmay laacib muhiim ah ka hor kulanka muhiimka ah ee ay Sabtida la ciyaari doonaan Ukraine.
England ayaa waxay wareegga siddeedda tartanka qaramada Yurub wada ciyaarayaan Ukraine iyagoo labadooduba kasoo kala gudbay Germany iyo Sweden, waxaanu midkood iska xaadirin doonaa wareegga siddeedda halka uu kan kalena tartanka ka hadhi doono.
Tababare Gareth Southgate ayaa ka hor ciyaarta Ukraine waxa uu xaqiijiyey in uu ka dhaawacmay laacibka da’da yar ee Bukayo Saka oo wax ku noqday tababarkii u dambeeyey ee Jimcihii ay samaynayeen ciyaartoyda xulka dalkaas.
Saka oo kusoo bilowday kulankii Czech Republic, qaab ciyaaareed wanaagsanna sameeyey ayaan qayb ka noqon doonin ciyaarta Ukraine, kaddib markii tijaabooyin lagu sameeyey ay muujiyeen inuu dhaawacan yahay.
Southgate oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Hadda ayaanu baadhitaan ku samaynay Bukayo, waxaanu qabaa jug yar oo maanta soo gaadhay. Inta kale ee ciyaartoydu waa taam, waana la heli karayaa.”
Xulka qaranka England ayaa haysta ciyaartooyo kale oo u beddeli doona Saka, waxaana ka mid ah Phil Foden iyo Jack Grealish. Sidoo kale, Jadon Sancho iyo Marcus Rashford ayaa iyaguna taam ah.
Qofka soo qoray hahah says:
England waxee ka soo gudubtay Jarmalka qoraalka iska saxa
Sede wax u wadan marka hore iska hubiya England waxay kaso gudubte qermaney